नेपालमा मनसुन सक्रिय : ३ दिन लगातार वर्षा हुने, बाढी पहिरोको जोखिम उच्च ! - Sagarmatha Online News Portal
नेपालमा मनसुन सक्रिय : ३ दिन लगातार वर्षा हुने, बाढी पहिरोको जोखिम उच्च !
काठमाडौं । मनसुन सक्रिय भएपछि केही दिनदेखि जारी वर्षा कम्तीमा अरू ३ दिन नरोकिने भएको छ ।
महाशाखाका अनुसार अहिले पनि मुलुकका विभिन्न भू-भागमा हल्कादेखि मध्यमस्तरको वर्षा भइरहेको छ । दिउँसोसम्म प्रदेश १, २, गण्डकी, प्रदेश ५ र सूदुरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ । आजै राति मुलुकका अधिकांश भू-भागमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने महाशाखाको पूर्वानुमान छ ।
महाशाखाले उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरण अनुसार मुलुकका विभिन्न स्थानमा न्यूनतम २ मिलिलिटरदेखि अधिकतम १ सय ३० मिलिलिटरसम्म वर्षा भएको छ ।